सहकारीको सहयोग साना उद्योगलाई
काठमाडौं सहकारी विभागले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बल्ल कृषिजन्य ३५ उद्योगलाई रू. ८५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । ठूला प्रशोधन उद्योगको सहयोगका निम्ति छुट्याइएको रू. १० करोड भने फ्रिज नै हुने भएको छ ।
अहिले उपलब्ध सहयोग कृषिजन्य पदार्थको प्रशोधनमा क्रियाशील साना उद्योगले पाउनेछन् । विभागले गत बुधवार यो निर्णय गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा साना प्रशोधन उद्योगका लागि रू. ९० लाख छुट्याएको थियो । ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ साना उद्योगलाई सहयोग गर्न निर्णय गरेको हो । सहयोगका निम्ति देशभरिबाट ८५ वटा आवेदन गरेका थिए । जसमध्ये ३५ वटा प्रशोधन उद्योगलाई विभागले सहयोगका निम्ति छनोट गरेको हो ।
सहकारीको सहयोग पाउन छनोट भएका कृषिजन्य साना प्रशोधन उद्योगहरूमा ४ जडिबुटी, १७ दुग्ध, ७ मह, ३ अदुवा, १ जुनार, १ कफी र २ चिया उद्योगहरू रहेका छन् । ४ जडिबुटी उद्योगलाई रू. १२ लाख ६५ हजार, १७ दुग्ध उद्योगलाई रू. ३६ लाख ५ हजार, सात मह उद्योगलाई रू. १४ लाख, तीन अदुवा उद्योगलाई रू. ६ लाख, एक जुनार उद्योगलाई रू. एक लाख ७० हजार, एक कफी उद्योगलाई रू. ९ लाख ५० हजार, सहयोग दिने निर्णय गरिएको जानकारी विभागका उपरजिस्टार गोपीकृष्ण निरौलाले जानकारी दिए ।
पर्यटनलाई ८१ करोड बजेट प्रस्ताव[२०७८ बैशाख, ३१]
चिनियाँ सामानको भाउ नबढ्ने[२०७८ बैशाख, ३०]
वाणिज्य बैंकका शाखा ९ सय ४५[२०७८ बैशाख, २९]